नेपालका १० ट्रेन्डिङ भिडियो मध्ये ६ बुहारी हत्याकाण्ड संग सम्बन्धित (हेर्नुहोस १० वटै भिडियो)
युट्युबमा नेपालका १० ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मध्ये २ गित, १ हास्यब्यङ्य, १ रियालिटी शो र ६ बुहारी हत्याकाण्ड संग सम्बन्धित भिडियो ट्रेन्डिङमा परेका छन ।
काठमाडौ – करोडौ नेपालीको मन जितेको सुन साइली बोलको गीतमा अडियो इन्जिनियरिङ गरेका उज्वल महतमाथि बिहीबार गम्भीर आरोप लागेको छ। उनलाई भाइबुहारीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनले गत बिहीबार दिउँसो २५ वर्षीय बुहारी अञ्जना महतमाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
उज्वलले गत मे महिनामा फेसबुक स्टाटसमा कानको समस्याका कारण अडियो इन्जिनियरिङ नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।उनले पछिल्ला दिनमा आफ्नो फेसबुकमा शंकास्पद क्रियाकलाप देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रहरीका अनुसार अभियुक्त महतको एउटा औंला काटिएको छ। बज्रबाराही अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई पाटन अस्पतालमा लगिएको थियो। पाटन अस्पतालले बी एण्ड बी पठाएको थियो।उनको औंलाको शल्यक्रिया गर्न समय लाग्ने भएपछि अहिले भने महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँमा राखिएको छ। बुहारी अञ्जना विदेश जाने तयारीमा थिइन्। उनमा मानसिक समस्या रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको छ । आज नेपालमा ट्रेन्डिङमा परेको भिडियोहरु हेर्नुहोस ।
१०. ट्रेन्डिङ (Tarabaji Lai Lai / kapurika2 /The NEXT ft Kabita Nepali/ Sunil Katuwal /Anjila Regmi)
९. ट्रेन्डिङ (कसरी गरे जेठाजुले बुहारीको हत्या || CMW)
८. ट्रेन्डिङ (जेठाजु बुहारी काण्ड : के भयको थियो त्यो दिन घरमा jethaju buhari kand lalitpur)
७. ट्रेन्डिङ (मोडल अन्जनालाई आफ्नै जेठाजुले यसरी काटेर मरेको रहेछन,अधुरै रह्यो क्यानडा जने सपना ll Anjana Mahat)
६. ट्रेन्डिङ (Timro Mayale Badhera Rakha – Cover Female Version By Eleena Chauhan)
५. ट्रेन्डिङ (Bhadragol || Episode-210 || 10-May-2019 || By Media Hub Official Channel)
४. ट्रेन्डिङ (मेरो दिदिलाई टुक्रा टुक्रा पारेर मार्दा कति दुख्यो होला, आमा बोल्नै सक्नुभएन, Lalitpur Kanda)
३. ट्रेन्डिङ (KO BANCHHA CROREPATI || KBC Nepal || SEASON 01 || EPISODE 41 || FULL EPISODE)
२. ट्रेन्डिङ (ललितपुर काण्ड: बुबाले खुलाए सबै कुरा, के वास्तविकता यो नै हो त ? Anjana Lama Mahat)
१. ट्रेण्डिङ (सासु-आमा र बुवाले रुंदै खुलाए सबै कुरा | ललितपुर हत्या-काण्ड | Simrik Online)